27 / 07 / 2021 27 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 458 Views စာ0မှတ်ချက် Banijay, channel 4, တရုတ်နိုင်ငံ, Lego, Lego Master, Lego MASTERS သြစတြေးလျ, Lego Master တရုတ်, Lego MASTERS အမေရိကန်နိုင်ငံ, အဆိုပါ LEGO Group
Lego MASTERS သည်တရုတ်ပြည်သို့၎င်း၏နောက်ဆုံးတင်ပို့မှုအတွက် ဦး တည်နေသည်။ ၎င်းသည်မိခင်ကုမ္ပဏီ Banijay ကကမ္ဘာ့မှတ်ပုံတင်အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။
Long Qing မီဒီယာ st ရှိပြီးသားartရှန်ကျန်းတီဗီအတွက်တရုတ်စီးရီးတွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြတ်ထုတ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည် Lego လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံတွင်အုပ်စု၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာသည့်စျေးကွက်တိုးတက်မှုဖြစ်သော်လည်းအောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်သည် Lego MASTERS ကိုအမေရိကန်နှင့်သြစတြေးလျတို့အပါအဝင်နိုင်ငံများတွင်တွေ့ရသည်။
“ ဒီအစီအစဉ်ဟာတရုတ်ပရိသတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ငါတို့ p နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာမယုံနိုင်စရာပဲartShenzhen တီဗီ၊ Long Qing Media၊ Huo Yuan မီဒီယာနှင့် the Lego ဒီလိုလုပ်ဖို့ Group လုပ်ဖို့လိုတယ်” ဟု Banijay ၏အကြီးတန်းဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ VP ဖြစ်သူ Simon Cox ကကြေငြာခဲ့သည်။
"ဒီ Lego အမှတ်တံဆိပ်သည်တရုတ်စျေးကွက်တွင်ကြီးမားသောပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအားလုံးမှာကြီးမားသည် Lego Long Qing Media ရဲ့အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒုဥက္ကpresident္ဌ Tony Zhang တို့ကပြောကြားခဲ့သည် အမျိုးမျိုး။ ပရိသတ်တွေဆီကိုဒီတီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွယူဆောင်လာစေချင်တယ်။
တရုတ်သည်ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့် ၁၆ ယောက်မြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာသည် Lego ယူနိုက်တက်စတိတ် ၄ မှ Channel4ကိုစတင်ခဲ့သည့် MASTERS သည်တတိယအကြိမ်မြောက်ဗြိတိန်ရာသီသည်ယခုအချိန်တွင်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ သို့သော်ထုတ်လွှင့်သူသည်အနည်းဆုံးပထမရာသီအတွက်အခွင့်အရေးကိုယူခဲ့သည်။ Lego MASTERS USA နှင့် Lego MASTERS သြစတြေးလျ, အဆုံးစွန်သောထုတ်လွှင့စတင်ခဲ့သည် ဒီတနင်္ဂနွေ.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ရေကူးခြင်းအတွက်ချစ်စရာကောင်းသောနေ့
ဟေ့ Lego, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘို့အ Captain America နှင့်အတူကအအေး? →